Waa maxay farqiga u dhexeeya qaboojiyeyaasha mobilada iyo qaboojiyeyaasha? | Lianchuang
Qaboojiyaha / kululeeyaha hawada
Mini Qaboojiye-Qaboojiye Hawo
Khabiirka Hawada Badan 4 4
Multi Air Expert 5 1 kii
Khabiirka Multi Tower Air 4 4 kiiba 1
Hawada Hawada Sare
Tower Air meeldhexaadka ah
Young Guy Shaashadda Hawada Shaqsiga
Kululeeyaha sensor sensor
Kuleyliyaha leh huurka
Tower Ultra khafiifa kululeeyaha
Tower leh Eco kululeeyaha
Kululeeyaha qolka oo dhan
Waa maxay farqiga u dhexeeya qaboojiyeyaasha mobilada iyo qaboojiyeyaasha?
Qaboojiyeyaashu waa aaladaha qaboojinta ee inta badan la isticmaalo xagaaga. Waxay guud ahaan go'an yihiin. Si loo sahlo, waxaa suuqa ku jira qaboojiyeyaal mooneyaal ah iyo qaboojiyeyaal, oo aan midkoodna go'an. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya qaboojiyeyaasha moobiillada iyo qaboojiyeyaasha?
1. Waa maxay qaboojiyaha hawada?
Qaboojiyaha mobilada waa hawo qaboojiye la dhaqaajin karo markuu doono. Waxaa jira kombaresarayaal, marawaxadaha qiiqa, kuleyliyaha korontada ku shaqeeya, uumi bixiyeyaal, hawo qaboojiyeyaal qaboojiye ah iyo qalab kale oo jirka ku jira. Jidhku wuxuu ku qalabeysan yahay fiilo koronto iyadoo salka jiifku uu ku qalabaysan yahay shubmo. mobile Muuqaalku waa moodo, iftiin iyo jilicsan.
2. Waa maxay qaboojiye hawadu?
Qaboojiyaha hawadu waa nooc ka mid ah qalabka guryaha ee leh marawaxadda iyo habka qaboojiyaha. Waxay leedahay hawlo badan sida hawo bixinta, qaboojiyaha, iyo huur-qaadista. Adoo adeegsanaya biyaha sida dhexdhexaadka ah, waxay u diri kartaa hawo qabow ka hooseysa heerkulka qolka ama hawo diiran. Inta badan qaboojiyeyaasha hawada waxay leeyihiin miiraa siigada si ay hawada u shaandheeyaan. Haddii uu jiro lakab sawir-qaade ah oo ku yaal shaandhada boodhka, waxay sidoo kale yeelan kartaa saameyn jeermis-dilis ah.
Ta saddexaad, farqiga u dhexeeya qaboojiyeyaasha mobilada iyo qaboojiyeyaasha
1. Qaboojiyaha mobilada ayaa leh moodel iyo mug yar, waana mid casri ah oo la qaadan karo. Qaboojiyaha mobilada waa nooc ka mid ah qaboojiyaha mobilada ee ka dhex baxa fikradda naqshadeynta soo jireenka ah, waa xayawaan, wuxuu leeyahay saamiga waxtarka sare ee tamarta, buuqa yar, uma baahna in la rakibo, waxaana lagu dhejin karaa guryo kala duwan sida uu doono.
2. Qaboojiyaha hawadu wuxuu u isticmaalaa biyaha dhex-dhexaad wuxuuna soo gaarsiin karaa hawo qabow ka hooseysa heerkulka qolka ama hawo diiran oo qoyan. Marka loo barbardhigo taageerayaasha korontada, qaboojiyeyaasha hawadu waxay leeyihiin shaqooyinka hawo nadiif ah iyo ka qaadista urta. Qaboojiyeyaasha hawada kama horjoogsan karaan oo keliya mitirka korontada inuu shiicmo, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin dareen qabow oo qabow.
Tan afraad, yaa fiican, qaboojiyaha hawo-dhaqaaqa ama qaboojiyaha hawada
1. Qaboojiyeyaasha hawadu waxay hoos u dhigi karaan heerkulka qiyaastii 5-6 digrii marka loo eego marawaxadaha caadiga ah, waxay leeyihiin awood koronto oo hooseysa, mana laha wax uumiga ka baxa, waxayna kordhin karaan qoyaanka hawada marka la isticmaalo, taas oo aad ugu habboon meelaha leh cimilada qalalan. Saamaynta hagaajinta heerkulku waxay la mid tahay tan kuwa qaboojiyayaasha dhaqanka. Waxay si cad u hagaajin kartaa heerkulka hawada gudaha, waxaana lagu hagaajin karaa heerkulka kala duwan hadba sida loogu baahdo. Si kastaba ha noqotee, ka dib isticmaalka, heerkulka hawada ee gudaha ma aha mid isku mid ah, taas oo si fudud u sababi karta raaxo la'aan iyo cudurro qaboojiyaha. Isla mar ahaantaana, korontadu way ballaadhan tahay isticmaalkeeduna waa weyn yahay.
2. Qaboojiyaha wareega wuxuu ku habboon yahay xafiiska, bannaanka iyo meelaha kale ee bulshada. Isticmaalka korontada iyo qiimaha qaboojiyayaasha mobilada ayaa aad u sarreeya.
Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd waxay iskuxireysaa R & D, waxsoosaarka, iibka iyo adeegyada, dhanka kale waxay u hogaansameysaa is-abuurnimo iyadoo la raacayo tilmaamaha baahida macaamiisha.
Hada nala soo xiriir
Telefoon: + 86-755-84150793